भर्खरै पूर्वपश्चिम राजमार्गको पुल बग्यो, जोखिम मोलेर खोला तर्दै यात्रु – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै पूर्वपश्चिम राजमार्गको पुल बग्यो, जोखिम मोलेर खोला तर्दै यात्रु
भर्खरै पूर्वपश्चिम राजमार्गको पुल बग्यो, जोखिम मोलेर खोला तर्दै यात्रु
असार, बर्दिवास । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिकास्थित भप्सी पुल बाढीले बगाएको छ । पुलको बीच भाग नै भत्किएपछि आवत-जावत ठप्प छ । अविरल वर्षापछि आएको बाढीले पुल बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले जानकारी दिए । तर कतिपय व्यक्तिहरु भने जोखिम मोल्दै बाढी तरेर वारपार गरिरहेका छन् ।
यो पनिः काठमाडौं -काठमाडौं महानगरपालिका र वडा कार्यालयले बागदरबारस्थित ढल निकासका लागि गरेको प्रयत्न असफल भएको छ। ढल थुनिँदा फेरि महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवन र चाइना टाउनको भुइँतला फेरि डुबानमा परेको छ।महानगरपालिका र वडा कार्यालयले ढल निकासका लागि सोमबार डोजर लगाएर केन्द्रीय कारागारका प्रहरी बस्दै आएको दुईकोठे भवन भत्काएका थिए। भवन भत्काएपछि डोजरले खनेर ढलको पानीलाई निकास दिइएको थियो। तर खनेको ठाउँमा ह्युमपाइप नहालेका कारण मंगलबारदेखि फेरि ढल थुनिएको हो।
सोही भवनका कारण ढल थुनिएपछि निकासका लागि भत्काइएको थियो।ढलको पानीले निकास नपाउँदा कारागारको क्यान्टिन भवनसमेत धरापमा परेको छ। ढलको पानी थुनिएर दर्जनौं कार्यालय र पसल रहेका भवनका भुइँतला पोखरीमा परिणत हुँदा दुर्गन्ध फैलिएको छ। दुर्गन्धका कारण विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र व्यापारी नाकमुख थुनेर काम गर्न बाध्य छन। दुर्गन्धले महामारी फैलिने त्रास पनि बढेको छ। ढलको पानीले निकास नपाउँदा कारागारको क्यान्टिन भवनसमेत धरापमा परेको छ।निकासका लागि खनेको माटो वर्षाको पानीसँगै त्यही खसेर फेरि ढल प्रवाह अवरुद्ध भएको स्थानीयले बताए। जेटमेसिन लगाएर बुधबार जमेको पानीलाई निकास दिने प्रयत्न गरिए पनि सफलता मिलेन।
सोमबार डोजरले केन्द्रीय कारागारको भवन भत्काएर खनेपछि ढल खुलेको थियो। स्थानीयका अनुसा खनेको स्थानमा तत्काल नयाँ पाइप राखेर पुरिएको भए समस्या दोहोरिने थिएन। कामदारलाई पैसा नदिएपछि ढलको काम पूरा हुन नसकेको एक स्थानीयले बताए। ‘ढल निकासमा खटिएका कामदारले पैसा नपाएको भन्ने सुनिएको छ,’ ती स्थानीयले भने, ‘त्यसैले कामदारले फटाफट काम गर्न नमानेको हुन सक्छ। बुधबार साँझसम्म ढल निकासका लागि पाइप हालिएको छैन। काम गर्न लगाएपछि पैसा दिनु नि ? भवन भत्काएपछि त ढल निकास हुन्छ भनेर सोचेका थियौं तर समस्या सुल्झिएन।’ नागरिक दैनिकबाट
यी काम महिलाले रातीमा गर्दा हुन्छ धनको वर्षा ! जान्नुहोस्
मध्यराती त्रिशूलीमा खस्यो ट्रक : सहचालक बेपत्ता
जेठ ५ गते देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल ! (विज्ञप्तिसहित)